Kushanda paImba yoUmambo
Bhaibheri rinorondedzera mapoka maviri evarume vechiKristu vanoita mabasa eungano—“vatariri nevashumiri vanoshumira.” (VaFiripi 1:1) Kakawanda kacho, panenge paine hama dzakadaro dzakati kuti dzinoshumira muungano imwe neimwe. Vashumiri vanoshumira vanoita basa ripi kuti tibatsirwe?
Vanobatsira dare revakuru. Vashumiri vanoshumira varume vane ukama hwakasimba naJehovha, vanovimbwa navo uye vanoshanda nesimba, vamwe vaduku muzera, vamwe vati kurei. Vanoita mabasa anokosha ane chokuita neungano uye Imba yoUmambo. Izvi zvinoita kuti vakuru vakwanise kuisa pfungwa pakudzidzisa uye pakufudza.
Vanoita mabasa anobatsira. Vamwe vashumiri vanoshumira vanonzi vashande sevarindiri kuti vagamuchire vanhu vose vanosvika pamisangano. Vamwe vanotarisira gudzanzwi, kugovera zvinyorwa, akaunzi dzeungano uye kupa vanhu vemuungano ndima dzokuparidzira. Vanobatsirawo pakuita kuti Imba yoUmambo igare yakanaka. Vakuru vangavakumbira kuti vabatsire vakwegura. Vashumiri vanoshumira vanoda chaizvo kuita chero mabasa avanopiwa, uye ungano inovaremekedza nemhaka yokuda kwavo kuita mabasa aya.—1 Timoti 3:13.
Vanoratidza muenzaniso wakanaka sevarume vechiKristu. Vashumiri vanoshumira vanosarudzwa pamusana peunhu hwavo hwakanaka hwechiKristu. Pavanopa hurukuro kana kuitisa zvikamu zvepamisangano, vanosimbisa kutenda kwedu. Nokuratidza muenzaniso wakanaka pakuparidza, vanotibatsira kuti tiwedzere kushingaira. Sezvo vachishanda zvakanaka nevakuru, vanoita kuti pave nemufaro uye kubatana. (VaEfeso 4:16) Nokufamba kwenguva, ivowo vangazokodzera kushumira sevakuru.
Vashumiri vanoshumira varume vakaita sei?
Vashumiri vanobatsira sei kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muungano?
Pose paunoenda kuImba yoUmambo, wana nguva yokuzivana nemumwe wevakuru kana vashumiri vanoshumira kusvikira wava kuvaziva vose nemhuri dzavo.